Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Fizahan-kiraro mitondra lohateny fitaterana antoka miaraka amin'ny antoka amin'ny fialantsasatra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Fiantohana fialan-tsasatra amin'ny kapa
Sandals Resorts International (SRI), orinasan-draharahan'ny marika fialan-tsasatra malaza any Karaiba Sandals Resorts sy Beaches Resorts, dia nanambara ny fampidirana ny Sandals Vacation Assurance, ny programa fiarovana lehibe indrindra momba ny fialan-tsasatra an'ity indostria ity izay manome antoka voalohany amin'ny indostria ho afaka. fialan-tsasatra fanoloana misy ny sidina ho an'ny vahiny voan'ny fanelingelenana momba ny dia lavitra COVID-19.
Ny mpitsidika ny Sandals Resorts sy ny Beach Resorts dia afaka manoratra tsy misy ahiahy miaraka amin'ny fiarovana fiaramanidina vaovao, fanoloana dia maimaimpoana ho an'ireo tsy ampoizina, sy maro hafa.
Ny programa dia manaisotra ny ahiahy amin'ny fitsangatsanganana ary manome toky ny vahiny fa azo antoka ny fampiasam-bolany.
Ny famandrihana ankehitriny sy vaovao natao ankehitriny hatramin'ny 31 desambra 2021, ho an'ny dia hatramin'ny 31 desambra 2022, dia mahazo ho azy fiarovana sandaly sy morontsiraka fiarovana amin'ny fiarovana azy ireo maimaimpoana.
Araka ny voalazan'ny filohan'ny mpanantanteraka SRI, Adam Stewart, ny programa vaovao momba ny fiantohana sandaly dia natao hanala ny ahiahy amin'ny dia lavitra, hanomezana antoka ny vahiny fa ny fampiasam-bolan'izy ireo amin'ny fialan-tsasatra miharo volo rehetra arovana amin'ny fanelingelenana ivelan'ny fifehezany.
“Tianay ny hametraka ny fahafinaretana sy ny fifaliana amin'ny fandaminana sy ny fiandrasana fialan-tsasatra tsara ho lasa fitsangatsanganana. Na dia tsikaritray aza ny tena ahiahy mety hanahaka ny sain'ny vahininay, dia mandray fepetra miavaka izahay mba hanesorana ny ahiahy amin'ny fampitoviana, mba hahafahan'ireo mpandeha mankafy ny dia fitsangatsanganana iray manontolo - manomboka amin'ny famandrihana ka hatramin'ny fiaingana, ”hoy i Stewart.
Ny famandrihana ankehitriny sy vaovao rehetra natao izao hatramin'ny 31 desambra 2021, ho an'ny dia hatramin'ny 31 desambra 2022, dia handray ho azy ireo ny fiarovana ny sandaly sy ny morontsiraka amin'ny fiarovana azy ireo maimaimpoana.
Soa azo avy amin'ny programa kiraro sy antoka eny am-pasika: